बाहुनको छोरी परियारकी बुहारी, झुक्किएर बिहे भयो, अहिले ‘भिडियोसहित’ – Wow Sansar
बाहुनको छोरी परियारकी बुहारी, झुक्किएर बिहे भयो, अहिले ‘भिडियोसहित’
December 31, 2020 71
चितवन । चितवनकी नीतु नेपाली । वर्षले ३२ । ब्राहमणकी छोरी परियारकी बुहारी । कक्षा ८ मा पढ्दा खेरी कहिले काहीँ सार्वजनिक गाडीमा स्कूल चढेर जाने जाने आउने गर्थिन् । सोही क्रममा उनको गाडी ड्राईभरसंग माया बस्यो । नीतु भन्छिन्,‘त्यतिबेलाको जमानामा न फोन थियो न चिठ्ठी पठाउने कुनै माध्यम नै पठाउँ भने पनि कस्को हातमा पठाउनु अनि के भनेर पठाउनु ? झण्डै २ महिनाको समय अवधिमा देखादेख भयो होला ।’
त्यतिबेला दिपेन्द्रको परिचय पत्रमा उनले खड्का लेखेको देखेकी थिईन् । उनलाई लागेको थियो दिपेन्द्र खड्का क्षेत्रीका छोरा रहेछन् । यतिबेलासम्म उनीहरुबी प्रेमको कुनै सम्बन्ध नै थिएन । तर एकदिन दिपेन्द्रले नीतुलाई मनकामनाको केवुलकार चढाउने र मनकामना घुम्न लैजाने प्रस्ताव राखे । नीतुले मनकामना माताको दर्शन गर्न पाईन्छ भने र केवुलकार चढ्न पाईन्छ भने मनकामना घुम्न जाने दिपेन्द्रको प्रस्तावलाई उनले स्वीकार गरिन् ।
त्यही समयदेखि उनीहरुको बोलीचालीको शुरुवात भयो । बिस्तारै बिस्तारै बोल्ने क्रम बढ्दै गएपछि नीतु र दिपेन्द्रबीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ नै बन्दै गयो । सम्बन्धले एउटा प्रेमको रुप लिंदै गएपछि उनीहरुले बिहे पनि गरे । सबै कुरा ठीक हुँदै थियो । तर अचानक दिपेन्द्रले नीतुलाई छाडिदिए । किन छाडे ? के भयो त्यस्तो ? यो विषयमा नीतु के भन्छिन् ? उनका सबै अन्तरकथा सुन्नकोलागी तलको भिडियो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला । भिडियो
Prevश्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल
Nextपाथीभराको जङ्गलमा एक साता देखि लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएन
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6722)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3620)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1250)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1070)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1065)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1035)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1003)
एक जोडीले लिएका थिए होटलमा कोठा, लामो समयसम्म बाहिर निस्किएनन्, कोठामा जाँदा कर्मचारीहरु चकित (673)
होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि… (623)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (594)
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता न’गर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं